Jamie Carragher oo tilmaamay xiddiga kaliya Yurub ka ciyaara ee ka fiican Maxamed Saalax – Gool FM
(Liverpool) 25 Feb 2020. Halyeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jamie Carragher ayaa tilmaamay xiddiga kaliya Yurub ka ciyaara ee ka fiican Maxamed Saalax.
Dhinaca kale halyeeyga reer England ee Jamie Carragher ayaa wuxuu sidoo kale ka digay wararka sheegaya in la iibiyo Maxamed Saalax si badelkiisa loo keeno Jadon Sancho ama Kylian Mbappé.
Wargeyska “Daily Star” ee dalka England ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay Jamie Carragher, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Tan iyo markii lala saxiixday Maxamed Saalax, waxaan ka hadalnaa kan ugu badan ee goolal dhaliya iyo kan ugu badan ee caawiya, waxa aan inta ugu badan Saalax ku jeclahay ayaa ah inuusan dhaawacmin”.
“Waxaa jiro hadalo ka dhex jira Liverpool, laga yaabee inay riyo tahay, taasoo ku saabsan inuu imaanayo Mbappé, waxaa sidoo kale jira warar la xiriira Jadon Sancho, kaasoo u muuqda inuu xulasho macquul ah u yahay dhamaan kooxaha Premier League”.
“Kylian Mbappé waa ciyaaryahan heer caalami ah, malaha waa ciyaaryahanka raaci doona wadooyinka Ronaldo iyo Messi, sidoo kale Sancho wuxuu qarka u saaran yahay inuu noqdo ciyaartoy sidan oo kale ah, laakiin waxaan qabaa inay ku adkaan doonto iyaga labada ama saddexda sanno ugu horreysa ee kooxda Liverpool haddii ay dhacdo inay la soo saxiixato labadooda si ay u gaaraan rikoorradan”.
“Sababtan darteed, waxaan aamminsanahay in taageerayaasha Liverpool ay taxaddar muujinayaan, marka loo fiiriyo rikooradan, Messi oo kaliya ayaa ah kan kaga fiican Saalax kubbadda cagta Yurub”.